Jan. 21, 2020 9:03 AM EST
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe’s main opposition leader said Tuesday he will roll out anti-government street protests this year, declaring that the collapsing economy will improve only if political issues, including a long-disputed election, are resolved. Nelson Chamisa told hundreds of Movement...
Jan. 17, 2020 1:35 PM EST
Jan. 11, 2020 3:56 PM EST
HARARE, Zimbabwe (AP) — China’s foreign minister has arrived in Zimbabwe Saturday as part of a five-nation tour of Africa that seeks to promote the Asian giant's economic and political interests on the continent. Wang Yi is set to visit a Zimbabwe tobacco farm and meet with President Emmerson...
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwean authorities say they have retrieved the bodies of two park rangers who had arrested four poachers but were then thrown into Lake Kariba by the suspects. The bodies of the two rangers were taken to the capital, Harare, for examinations, said Tinashe Farawo, spokesman for...
Dec. 19, 2019 8:34 AM EST
HARARE, Zimbabwe (AP) — Outside Cecilia Ziwane's house sits a neatly stacked woodpile next to a small solar panel — her two major sources of energy. “We cannot do without them,” said the mother of three, who lives in Glen Norah, a working class suburb of Zimbabwe's capital, Harare....
Dec. 16, 2019 11:28 AM EST
HARARE, Zimbabwe (AP) — The wife of Zimbabwe’s vice president has been charged with attempting to kill her husband. Marry Chiwenga, a former model and wife of Vice President Constantino Chiwenga, appeared at the Harare Magistrates Court Monday where she was also charged with money laundering and...